ပ​လတ်​စ​တစ် ဆာ​ဂျ​ရီ လုပ်​လိုက်​လို့ အခန့်​မ​သင့်​ရင်…. | J-Myanmar
ပ​လတ်​စ​တစ် ဆာ​ဂျ​ရီ လုပ်​လိုက်​လို့ အခန့်​မ​သင့်​ရင်….
သူ့​ကိုယ်​သူ လုံး​ဝ​ပုံစံ​ပြောင်းလဲ​ပစ်လိုက်​တဲ့ ရပ်(ပ်)အဆိုတော် လစ်​တယ်လ် ကင်မ် ရဲ့ ပုံ​တွေ​ကို မြင်​ဖူး​ကောင်း​မြင်​ဖူး​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ်။ သူမ​ဟာ ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ​တွေ ဆက်တိုက်​လုပ်​ပြီး အသားအရေ​က​အစ လူ​မျိုး​ပုံစံ​ပါ​ပြောင်း​ခဲ့​တာ​ပါ။ အသွင်အပြင်​ကို လုံး​၀ ပုံစံ​ပြောင်း​ပစ်​ခဲ့​တဲ့ အခြားကျော်​ကြား​သူ​တွေ​နဲ့ မ​နီး​ယိုး​စွဲ​ပါ​ပဲ။ ဥပမာ​အား​ဖြင့်​ပြော​ရ​ရင် မိုက်​ကယ်​ဂျက်​ဆင်​လို​ပေါ့။
တုန်လှုပ်​စရာ​ကောင်း​လောက်​တဲ့ ဆာ​ဂျ​ရီ​မျိုး​တွေ​လုပ်​နေ​ခဲ့​တဲ့ ကျော်​ကြား​သူ​တွေ​ရဲ့ ဘေး​ကလူ​တွေ​က​လဲ နဲ⁠နဲ​လေး​မှ​မ​တား​ဘူး​လား​လို့ မေးခွန်းထုတ်​စရာ​တွေ​ဖြစ်လာ​ပါ​တယ်။ ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ လုပ်​လိုက်​လို့ မ​ခန့်​မ​သင့် တစ်​ခု⁠ခု​ချွတ်ချော်​သွား​ရင်​တော့ ကျော်​ကြား​သူမ​ဟုတ်​တဲ့ သာမန်​လူ​အသိုင်းအဝိုင်း​က သူ​တစ်​ယောက်​အတွက် ပို​ပြီး​ရင်နာ​ဖို့​ကောင်း​ပါ​လိမ့်​မယ်။
ဒီ​နား​မှာ ညစ်​ထုတ်​လိုက်၊ ဟို​နား​မှာ​ထိုး​ထည့်​လိုက်​နဲ့ နောက်ဆုံး​မှာ ပုံစံ​က​လုံး​၀​ပြောင်းလဲ​သွား​ရော။ လစ်​တယ်လ် ကင်မ်​လို ပ​လတ်​စ​တစ် ဆာ​ဂ​ရီ​လုပ်​နေ​တဲ့​သူ​တွေ တစ်​ပုံ​ကြီး​ရယ်။ ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ​နဲ့​ပတ်သက်​လို့ မတော်တဆ​မှားယွင်း​မှု​တွေ​အကြောင်း​ကို အတင်း​အဖျင်း​မဂ္ဂဇင်း​တွေ​ထဲ​မှာ​တောင် နည်း⁠နည်း​လေး​မှဖော်​ပြ​လေ့​မ​ရှိ​ဘူး။
ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ​လုပ်​လိုက်​လို့ အခန့်​မ​သင့်​ရင် ကျန်းမာ​ရေး​ကို အတော်​ဆိုး​ဆိုးရွား​ရွား​ဖြစ်​စေ​ပြီး​တော့ အသက်​ပါ​ဆုံးရှုံး​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဗြိ​တိန် ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ အသိုင်းအဝိုင်း​ကို သုံးသပ်​ထား​တဲ့ သုံးသပ်​ချက်​တွေ​ကတော့…………။
အသက်​၂​ဝ​အရွယ်​ရှိ​တဲ့ ဗြိ​တိန်မော်​ဒယ် Claudia Aderotimi ဟာ ၂​၀​၁⁠၁​ခု​နှစ်​မှာ အမေ​ရိ​ကန်​ကို​သွား​ခဲ့​ပြီး ပ​လတ်​စ​တစ်​ဆာ​ဂျ​ရီ​လုပ်​ခဲ့​ပါ​တယ်။ များ​မ​ကြာ​မီ​မှာ ကြေကွဲ​စရာ​ကောင်း​လောက်​အောင်​ပဲ သေ​ဆုံး​သွား​ခဲ့​ပါ​တယ်။ ခွဲ​စိပ်​ပြီး​နောက် အစ​ပိုင်း​မှာ ရင်ဘတ်​တွေ​နာ​လာ​ပြီး အသက်ရှူ​နှေး​လာ​ပါ​တယ်။ ဆီ​လီ​ကွန်​ထိုး​ထည့်​ရာ​က​နေ ဖြစ်လာ​တဲ့ ရှုပ်​ထွေး​မှု​တွေ​ကြောင့် သူ့​အဆုတ်​ထဲ​မှာ သွေးခဲ​ပြီး သေ​ဆုံး​သွား​တာ​ဖြစ်​တယ်​လို့ သေ​မှု​သေ​ခင်း အရာရှိ​တွေ​က​ပြော​ပြ​ခဲ့​ပါ​တယ်။
လက်မှတ်ထိုး​စရာ​မ​လို​တဲ့ အတိုင်​ပင်​ခံ​တွေ​ရဲ့ အကြံ​ပြု​ချက်​တွေ​လာ​ပြီး​တဲ့​နောက်​မှာ ခွဲ​စိပ်​မှု​နဲ့​ပတ်သက်​လို့ လျှော့​ဈေး​ရ​ဖို့​ဆို​ရင် လက်မှတ်ထိုး​ဖို့​လို​အပ် တယ်​ဆို​တာ​ကို ကြား​ရ​ပါ​လိမ့်​မယ်။ ခွဲ​စိပ်​မှု​နဲ့​ပတ်သက်​ပြီး ဖြစ်လာ​နိုင်​တဲ့ အန္တ​ရယ်​တွေ​ကို​လုံး​၀ သတိပြု​ပြီး၊ သေချာ​စဉ်းစား​ပြီး​မှ​သာ လက်မှတ်ထိုး​ပါ။ အလှ​ပြုပြင်​ရေး​အဖွဲ့​က ဘာ​ကို​မှ အသေး​စိတ်​မ​ပြော​ပြ​ဘူး​ဆို​ရင်​တော့ အရင်​ဆုံး သင့်​ရဲ့ အထွေ​ထွေ​ရောဂါ​ကု​ဆရာဝန်​နဲ့ တိုင်ပင်​ဆွေးနွေး​ပါ​ဦး။
လက်မှတ်​မထိုး​ခင် ခွဲ​စိပ်​မယ့်​သူ​ရဲ့​ဆေး​ဘက်​ဆိုင်​ရာ အထောက်​အထား​တွေ​ကို စစ်ဆေး​ပါ။ ဗြိ​တိန်​မှာ​ခွဲ​စိပ်​မယ်​ဆို​ရင်​တော့ အထွေ​ထွေ​ဆေး​ဘက်​ဆိုင်​ရာ​ကောင်​စီ​မှာ စစ်ဆေး​လို့​ရ​ပါ​တယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံ​ခြား​ထွက်​ပြီး ခွဲ​စိပ်​ရ​မယ့်​နေရာ​ကို သတိထား​ပါ။
ဘယ်​လို​ပြဿနာ​မျိုးပဲ ဖြစ်လာ​ဖြစ်လာ ရင်ဆိုင်​ဖြေ​ရှင်း​ပါ။
ခွဲ​စိပ်​မှု​နဲ့​ပတ်သက်​ပြီး ရှု့ပ်​ထွေး​မှု​တစ်​စုံ​တစ်​ရာ​ရှိ​လာ​ရင် အရည်အချင်း​ပြည့်​မှီ​တဲ့ ကျွမ်းကျင်​ဆရာဝန်​ကြီး​တွေ ဆီ​က​နေ အကြံ​ဉာဏ်​ရ​ယူ​ပါ။ အခန့်​မ​သင့်​လို့ တစ်​ခု⁠ခု​ဖြစ်​သွား​ရင်​လည်း ရ​ရှိ​မယ့် နစ်နာ​ကြေး​ကို​အတည်ပြု ပေး​နိုင်​တဲ့ တရားရုံး​ရှေ့နေ​ချုပ်​တွေ​နဲ့​လည်း အဆက်​အသွယ်​လုပ်​ထား​ပါ။ မတော်တဆ​မှု ဆို​တာ​ဖြစ်​နိုင်​ပါ​တယ်။ ဘာ​တစ်​ခု​မှ​မ​လုပ်​ရ​သေး​ခင်​မှာ သေသေချာချာ​မေးမြန်း​ပြီး တတ်နိုင်​သ​မျှ ဂရုစိုက်​သင့်​ပါ​တယ်။
Next post V မဂ္ဂဇင်း​အတွက် အပေါ်​ပိုင်း​ဗလာ​ကျင်း ဓာတ်​ပုံ​အရိုက်​ခံ​ခဲ့​တဲ့ Selena Gomez
Previous post ရွှေဖြူ​အစစ်​နဲ့ လုပ်​ထား​တဲ့ အ​ဘူ​ဒါ​ဘီ​သူကြွယ်​ပိုင် မာ​စီ​ဒီး​ကား